Rajesh Koirala » Blog Archive » महिला नेतृलाई नाता जोडेरै हेर्नुपर्ने ?
महिला नेतृलाई नाता जोडेरै हेर्नुपर्ने ?
गत माघ २६ गते कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा ‘कोस्टारिकामा महिला राष्ट्रपति’ समाचार प्रकाशित भयो । समाचारका दुईमध्ये पहिलो वाक्य ‘कोस्टारिकामा लाउरा चिन्चिला पहिलो महिला राष्ट्रपति भएकी छिन्’ थियो भने अन्तिम वाक्य ‘पिता नोबेल विजेता ओस्कार आरियासको कार्यकालमा उनी उप-राष्ट्रपति थिइन्’ भन्ने कुरा प्रकाशित भएको थियो ।
उक्त पछिल्लो वाक्यले समाचार संप्रेषणभन्दा पनि व्यंग्य गरेजस्तो अनुभव हुन्छ । विश्वमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनेका महिलाहरूको परिचयमा यस्तै वाक्य जोडिने क्रम रोकिएको छैन । यो त धनी र विकसित राक्ष्ट्रको कुरा भयो । गरिब र विकासशील राष्ट्रमा त यस्तो चलन अझ व्यापक छ । त्यसमा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकले त कीर्तिमान नै बनाएका छन् । महिलाले नेतृत्व सम्हाल्दैमा ‘पिता वा पति’ को सम्बन्ध जोडिहाल्नुपर्छ र ?
अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति रहँदा उनकी पत्नी हिलारीलाई अर्को राष्ट्रपति भनेर लिइयो । हिलारी त्यहाँ एक्लै उभिन सकिनन् । उनका नाममा पति बिलको नाम जोडियो । सञ्चारकर्मीले पनि यसलाई फरक ढंगबाट हेर्न कन्जुस्याइँ गरे । छोराले पिताको बिँडो थाम्न हुन्छ भने छोरीले किन नहुने ? पतिको नाम जोडेर अघि बढ्दैमा उसको के गल्ती ?
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल, चिलीकी राष्ट्रपति मिचेल बाचेलेट, फिनल्यान्डकी राष्ट्रपति तार्जा हेलोनन, भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, आइसल्यान्डकी राष्ट्रपति जोहान्ना सिगौआर्दोट्टरि, आइरिस राष्ट्रपति मेरी म्याक एलिसी, जमैकाकी राष्ट्रपति पोर्टिया लुक्रेसिया सिम्पसन-मिलर, लात्भियाकी राष्ट्रपति भाइरा भाइक-फ्रेइबर्गा, न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्क आदिसँग आ-आफ्नै सशक्त राजनैतिक पृष्ठभूमि छन् ।
समाचारकै विश्लेषण गर्ने हो भने बेनजिर भुट्टोको निधन भएताका बिबिसीको वेभमा लेखिएको ‘जीवनचित्र’ (समवेदनामा दिइने जीवनी) को पहिलो वाक्यमै भनिएको छ, ‘बेनजिर भुट्टोले पिताकै राजनीतिलाई पछ्याइन् र दुवैको मृत्यु भयो-एकलाई फाँसी एवं अर्को अप्रत्याशित बम आक्रमणको सिकार ।’ अर्को एक वाक्यमा भनिएको छ, ‘भारतको नेहरु-गान्धी परिवारजस्तै पाकिस्तानका भुट्टो प्रसिद्ध राजनैतिक परिवार हो । बेनजिरका पिता जुल्फिकर अली भुट्टो सन् ७० को दशकको सुरुमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री थिए ।’
भारत एवं पाकिस्तानको राजनीतिमा पारिवारिक बाहुल्यका कुरा सञ्चार माध्यममा बारम्बार आउने गरेका छन् । भारतकी पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका बारेमा विकिपेडियाले लेखेको छ, ‘अक्सफोर्डमा पढेर सन् १९४१ मा भारत फर्किएपछि इन्दिरा पनि भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा होमिइन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि उनका पिता जवाहरलाल नेहरु स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री भए । सन् १९५० को दशकमा उनी पिताकी अनौपचारिक स्वकीय सचिव बनिन् । सन् १९६४ मा पिताको निधनपछि राष्ट्रपतिले उनलाई राज्यसभामा मनोनयन गरे । त्यसपछि उनी लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री रहँदा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइन् ।’
दक्षिण एसियामै बढी
विगत हेर्दा यस्ता प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । व्याख्या गर्ने शैली वास्तविक हुँदैन । पूर्वी पाकिस्तानबाट अलग्गिएर बनेको बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री रहेकी खालिदा जियासँग उनका पति जियाउर रहमानको नाम जोडिएर आउँछ । रहमानको निधनपछि खालिदाले बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टीको नेतृत्त्व सम्हालेकी हुन् । रहमान सन् १९८१ मा मारिएका थिए । खालिदामाथि पतिको नाम भजाएर राजनैतिक जीवन अघि बढाएको आरोप लगाइन्छ । उनी सन् १९९१-९६ र सन् २००१-०६ मा प्रधानमन्त्री बनिन् । उनकी प्रतिद्वन्द्वी शेख हसिना वाजेदका पिता शेख मुजीबुर रहमान स्वतन्त्र बंगलादेशका राष्ट्रपिता मानिन्छन् । शेख मुजीबुरका परिवारका अधिकांश सदस्य सन् १९७५ अगस्तको हत्याकाण्डमा मारिएका थिए । त्यसमा हसिना र उनकी बहिनीमात्र बाँचेका थिए । बंगलादेशकी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म पनि प्रधानमन्त्री भैसकेकी छिन् ।
श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री सोलोमन वेस्ट रिज्वे दियास बन्दरानायकाको सन् १९५९ मा हत्या भयो । त्यसको एक वर्ष नबित्दै उनकी पत्नी सिरिमाओलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । सिरिमाओ विश्वकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री भइन् । उनकै राजनैतिक पृष्ठभूमिमा छोरी चन्द्रिका कुमारातुङ्गा धेरैपटक प्रधानमन्त्री भइन् । छोरी प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनले आमालाई राष्ट्रपति बनाइन् ।
जुल्फिकर, जवाहरलाल, जियाउर, शेख मुजीबुर, सोलोमन, सिरिमाओ आदि जसको सन्दर्भ लिए पनि उनीहरूका छोराहरू राजनीतिमा उदाएनन् तर इन्दिराका छोरा राजीव प्रधानमन्त्री भए । सञ्जय राजनीतिमा उदाउन लागेका बेला दुर्घटनामा मरे । जुल्फिकरका दुई छोरा मारिए । सोलोमन र सिरिमाओका छोरा अनुरा श्रीलंकाका सभामुखसम्म भए ।
दक्षिणपूर्व एसिया पनि उस्तै
दक्षिणपूर्व एसिया पुग्दा हामी फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाको उदाहरण दिन सक्छौं । इन्डोनेसियामा निरंकुश सुहार्तोको शासन तीन दशकभन्दा बढी चल्यो । उनी पूर्वका नेता तथा संस्थापक राष्ट्रपति सुकार्नो मारिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति बनेका सुहार्तोले एकछत्र शासन गरे । सुहार्तो हटेपछि सुकार्नोकी छोरी मेगावती सुकार्नोपुत्री सन् १९९९-२००१ मा उप-राष्ट्रपति भइन् । उनी सन् २००४ मा राष्ट्रपति नै बनिन् ।
फिलिपिन्सका सिनेटर बेनिग्नो अक्विनो जुनियरसँग विवाह गरेकी कोराजन अक्विनो सन् १९८६ देखि सन् १९९२ सम्म राष्ट्रपति बनिन् । बेनिग्नो अक्विनो पनि निरंकुश फर्निनान्ड मार्कोसको शासनकालमा मारिएका थिए । वर्तमान फिलिपिनी राष्ट्रपति ग्लोरिया माकापागल अर्रोयोका पिता डियोस्दादो पान्गान माकापागल त्यहाँका नवौं राष्ट्रपति थिए ।
दक्षिण अमेरिकामा पनि यस्तै लहर छ । ‘इभा पेरोन’ लाई विश्वकै प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाउने अर्जेन्टिनाले अहिले अर्को यस्तै नाता सम्बन्धको इतिहास बनाएको छ । इभा त्यहाँका एकचालीसौं राष्ट्रपति हुँआ डोमिङ्गो पेरोनकी पत्नी थिइन् । सन् १९७४ मा हुँआको मृत्युपछि इभाले उक्त कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । अहिले क्रिस्टिना इलिजाबेट फर्नान्डेज दे किर्चनर राष्ट्रपति छिन् । उनी पूर्वराष्ट्रपति नेस्टर किर्चनरकी पत्नी हुन् ।
कहाँ-कहाँ छ, महिला नेतृत्व ?
हाल विश्वका नौ देशमा महिला राष्ट्रपति छन् । ती अर्जेन्टिना, चिली, फिनल्यान्ड, भारत, आयरल्यान्ड, लाइबेरिया, लिथुआनिया, फिलिपिन्स तथा स्वीट्जरल्यान्ड हुन् । कोस्टारिकामा लाउरा चिन्चिला चुनिएकी मात्र हुन् । उनले वैशाखको मध्यमा पद सम्हाल्नेछिन् । त्यस्तै छ देशमा प्रधानमन्त्री छन्, ती बंगलादेश, जर्मनी (चान्सलर), आइल्यान्ड, निदरल्यान्ड्स एन्टिल्स्, युक्रेन र आइसल्यान्ड हुन् ।
(२०६६ चैतको नारी मासिकमा प्रकाशित)